Yazi yonke into malunga noMthunywa | Iindaba zeGajethi
HMolo, ndiza kuqala kuthotho lwamanqaku kwi Messenger kubo bonke abo baqala ngeekhompyuter kwaye abakaze basebenzise inkqubo yemiyalezo ekhawulezileyo. Ndiza kuqala ngokubonisa ukuba le nkqubo yenzelwe ntoni, zeziphi iimfuno esizifunayo ukuze sikwazi ukuyisebenzisa, uyifaka kanjani iMessenger, uyila njani iakhawunti yomsebenzisi kwaye uyisebenzisa njani. Emva kwexesha siza kubona ezinye iinkalo eziphambili ekusetyenzisweni kwale nkqubo ukuze abasebenzisi beengcali abaninzi bafumane ulwazi olunomdla apha.
CNjengoko amanqaku ahlukeneyo kuMyalezo epapashwa, ndiza kongeza apha amakhonkco ahambelana nongeno ngalunye ukuze onke amanqaku amanyane abe lilinye njengelikhulu Incwadana yemiyalezo. Kodwa ngaphambi kokuqala ngala manqaku ndiza kuzama ukusombulula nakuphi na ukuthandabuza okuvele ngenxa yenguqulo entsha ebizwa ngokuba yi "Windows Live Messenger".
Ngaba i-MSN Messenger iyafana neWindows Live Messenger?
SKwaye, mandicacise, iWindows Live Messenger yinguqulelo entsha ye-MSN Messenger ukuze nzulu iseyeyona nkqubo inye kunye neyona nto iphambili yokuthumela imiyalezo kwangoko kodwa ngokusebenza okutsha kunye nembonakalo enesitayile esifana kakhulu nesitsha Windows Vista.
Ngaba kufuneka ndenze iakhawunti entsha ukuze ndisebenzise iWindows Live Messenger?
SUkuba ubunayo i-akhawunti ye-MSN Messenger okanye i-akhawunti ye-MSN Hotmail, akuyi kufuneka wenze iakhawunti entsha yenguqulo entsha ye-Messenger. Oko kukuthi, ukuba une-imeyile yohlobo TU_APODO_O_NOMBRE@hotmail.com okanye TU_APODO_O_NOMBRE@msn.com ungasebenzisa loo imeyile ukusebenzisa i-Messenger.
Ukuba andinayo iakhawunti yoMthunywa wakudala, ndingayisebenzisa le Windows Live Messenger?
SUkuba ungayisebenzisa, kuya kufuneka yenza iakhawuntiKwakhona, ukuba sele unayo iakhawunti ye-MSN Messenger (funda inqaku elidlulileyo) ungaqhubeka nokusebenzisa ingxelo entsha.
Uyenza njani iakhawunti yeHotmail ukusebenzisa iWindows Live Messenger?
EKulula kakhulu, kuya kufuneka ufunde incwadi «Uyenza njani iakhawunti yeHotmail» apho ndicacisa inyathelo ngenyathelo ukuba uyenza njani i-imeyile yakho ye-Hotmail.
Ngaba abafowunelwa endandinabo kwi-MSN Messenger balahlekile xa nditshintshela kwiWindows Live Messenger?
NOkanye, akunjalo, abafowunelwa owawunabo kwi-Messenger endala baya kuhlala kwiWindows Messenger entsha. Khumbula ukuba ngokuyintloko uMthunywa omtsha uhlaziyo kwaye ngenxa yoko igcina iimpawu zenguqulo yangaphambili kodwa ukongeza ukusebenza okutsha.
Ngaba kuya kufuneka ndihlawule uMthunywa omtsha okanye isimahla?
Al ngokufana nohlobo lwangaphambili onako khuphela iWindows Live Messenger mahala. Ukusetyenziswa kwayo kukhululekile kodwa kukho iinkonzo ezithile ezithwala indleko, ezinje ngokuthenga ii-emoticons. Ngayiphi na imeko, ezi nkonzo zikhethekileyo zinokuzikhethela kwaye ukusetyenziswa kwazo kuya kuba kuwe ukuze uqhubeke nokusebenzisa uMthunywa ngaphandle kokuhlawula ipennysi njengesiqhelo.
Zeziphi ezona mfuno zisezantsi ndizifunayo ukusebenzisa uMyalezo omtsha?
EUmgaqo wokuba neWindows XP unayo ngokwaneleyo kuba ukuba le nkqubo isebenza kuwe kuthathwa ngokuba ikhomputha yakho iyazifezekisa iimfuno ezisisiseko zokuqhuba inkqubo, oko kukuthi: 233 Mhz, 128 MB yememori ye-RAM kunye ne-Internet Explorer 6 enePakethe yeNkonzo. 1 ifakiwe. Kwelinye icala, kucingelwa ukuba ngeWindows Vista iyasebenza nangona ndingenayo le nkqubo yokusebenza kwaye andinakuyiqinisekisa.
BEwe, esi sisiphelo semibuzo ebuzwa rhoqo.Ukuba kukho umntu onemibuzo, nceda uphawule kwaye bazakuzama ukunceda. Apha ngezantsi ungayifumana abaqeqeshiweyo zenziwe kuMyalezo, ndiyathemba ukuba ziluncedo:
Uyenza njani iakhawunti kwiHotmail
Uyifaka njani i-Messenger entsha
Ngaba ndingatshintsha ndisuse uMthunywa omtsha uye kwi-Messenger endala ye-MSN?
Yeyiphi ingxelo yoMyalezo endiyifakileyo?
Sebenzisa uMthunywa ngaphandle kokufaka nantoni na
Ungayivula njani i-msn ezimbini
PHlala ubukele iitutorial ezintsha eziza kongezwa rhoqo. Imibuliso yesidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Yazi yonke into malunga noMthunywa
Izimvo ezi-96, shiya ezakho
Iincwadana ezinkulu kunye neenkcazo, bendikulandela ixesha elithile kwaye ndiyithanda kakhulu ibhlog yakho.
Ndiqhubeka ndikufunda. Impilo
Phendula ku Psiko
Hola Psiko Enkosi ngezimvo, ndiyathemba ukuqhubeka nokwenza iimanyuwali eziluncedo kuwe. Ukubulisa.
Andiyithandi into, le msn indinika iingxaki ezininzi
Molo, kulungile kuye kwafuneka ndifake i-msn xq ephilayo bayinyanzela, kodwa ukuba neakhawunti ye-hotmail, ayizukundivumela ndingene. Ndilahle ithemba ngokwenene. Ndiyathemba ukuba ingxelo elandelayo ikhawulezile, ibhetele kwaye izakuza kungekudala.
djkeiro isilo sitsho
yonke into iilungile
Phendula kwi-monkeiro monster
Imibuliso, enkosi, inkcazo yakho ilula kwaye ilula, kodwa ndifuna ukwazi ngoku kwaye ukuba ungandinceda nceda utshintshe i-hotmail yam ndiye kumzekelo wakudala we-7.5, andiyithandi bukhoma, kwaye ndifikelele kwezinye iindlela ze-hotmail zokutshintsha kodwa Khange ndiyifumane ingekabikho iOption enye ebuyisele kwimodeli yakudala kodwa ayisabonakali kwaye andazi ukuba ndingabulela njani ngayo yonke into uJeff
ubomi bunzulu kakhulu kangangokuba ndizinyanzele ukuba ndiyifake kwaye ndinqwenela ukuba andinakwenza nantoni na ukujonga ukuba ndinayo i-pentiun 4 ehlaziyiweyo ngememori engakumbi njl. Kodwa ndingenza njani ukuze ndibuyele ukuze ndibenayo enye?
Ndifuna ukwenza iakhawunti entsha ye-mesenller yam
Phila msn yeyona nto imbi icothisa i-pc kwaye yengozi rhoqo rhoqo
Kungcono ukufaka ingxelo 7.5 kwaye ungayihlaziyi ingxelo yakho yangoku
ngaphezulu kwesikhokelo oku kubonakala ngathi kwangaphambili kwiMicrosoft
Molo Julayi, baninzi abantu abacinga njengawe ukuba umthunywa omtsha umbi kakhulu kunendala. Uyaphazama kakhulu ukuba ucinga ukuba iMicrosoft iyanconywa apha, ngokuchaseneyo, ukuphuculwa kuyaxelwa kwaye iibugs ziyagxekwa. Kukho nawuphi na, uluvo lwakho kwaye luyahlonishwa. Umbuliso.
UNelson Aguilar (ePeru) sitsho
Molweni nonke, niyazi, ndicinga ukuba eyona nto ninayo nonke yingxaki yoqwalaselo, umthunywa ophilayo akalunganga kum, inyani kukuba ndenza kakuhle kakhulu ngayo kwaye i-ps indinike nesikhundla 4 gigabytes kwaye ayenzeki kum akukho nanye kwezi ngxaki uzikhankanyileyo. Kubonakala kum ukuba kufuneka bangene nzulu kwinkqubo yabo yokusebenza kwaye bayilungelelanise neemfuno zabo kwaye bangakhalazi i-ps yonke into ayizukuhanjiswa kwitreyi ...
Phendula kuNelson Aguilar (ePeru)
Uyazi ukuba kuyenzeka ukuba i-msn ilunge kakhulu ukuba ithethe kwaye kuloo nto kodwa ukuyikhuphela yi-p ... m ..., ngoba? Kutheni ewe kwaye ikwenza ukhululeke kwaye ngenyaniso ihlala ihlawula, ihlawulela aba bantu bakhathalele kuphela i-p ... imali esque me c ... kuzo izihlandlo ezi-2 !!!!
UDaniel ufunda inqaku.
Le msn ihlala igqibelele! ngalo lonke ixesha ndingena kwi-intanethi indenza ndifune ukudlala iHostel nomfana oyenzileyo. Ngaba ikhona indlela yokubuyela kwi-msn endala?
UMariely Fortunato Nietto sitsho
Ndifuna ukwazi ukuba ifakwa njani okanye ndibuyela njani kwi-msn kuba ndisakwazi ukufaka?
Phendula uMariely Fortunato Nietto
toño eru sitsho
Bayayazi le msn baphile kwaye banomdla omkhulu bayakunyanzela ukuba uyifakele into ebubudenge ukuba umntu uyayazi indlela yokusebenzisa eyendala …… .yintoni imbudane
Phendula Toño Peru
Andiyithandi le mess intsha iphilayo nokuba ...
Kungenxa yoko le nto ndifake i-7.5 endiyithanda kakhulu.
Kodwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo iposi inyuswe kumandla kwaye itshintshe ifomathi yayo. Ngaba ikhona indlela yokuba nomdala, lowo onemvelaphi eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neefestile zonxibelelwano ozithandayo ekunene kwesikrini. imibuliso nemibulelo
La pao funda ukuphela kwenqaku kwaye uya kubona ukuba unekhonkco elichaza indlela yokwenza.
ULina Maria Marin sitsho
Khange ndikwazi ukufaka iiwindows live messenger kwi-pc yam ukusuka kwifayile ye-
iofisi, kuba umphathi wenethiwekhi uvimbe ikhompyuter kolu hlobo lokhuphelo.
Ngaba ikhona indlela yokuyikhuphela ngaphandle kwemvume yomlawuli ??.
okanye ndingancokola njani kule meko?
Phendula uLina María Marín
Molo Lina, ndicinga ukuba yintoni oyifunayo yile:
Umthunywa ngaphandle kokufaka nantoni na
Ndiyathemba ukuba oku kungakunceda. Umbuliso.
Ndifuna nje ukuba undincede ndenze isithunywa sam, andinakundinceda
betzabet cofa kwikhonkco kwindlela yokwenza umthunywa. Kukule nqaku.
emm intle kakhulu kodwa yenziwe phi le msn ???? okeii undazise msn plizz ndithumele umyalezo kwaye ndifuna i-msn entsha
Molo Javi, ngokugqwesileyo kwiwebhusayithi yakho, iincwadana ezintle kunye nezifundo, ndiyavuyisana nawe.
Xa uqala iWindows Live Messenger 8.5, ibhokisi yencoko yababini iyavela:
1.- Iakhawunti ye-imeyile
njl njl njl
Kwinqaku 1.- Iakhawunti ye-imeyile:
Ndiyisusa okanye ndiyicime njani idilesi yemeyile evela kuludwe oluluhlu lwemenyu?
Enkosi kakhulu ngempendulo yakho !!!
León ndinomdla wokwazi ukuba ungayenza njani le nto uyicelayo ukuze wenze incwadi yemigaqo. Ndiyibhala phantsi kwaye ndiyathemba ukuyenza ngeentsuku ezimbalwa Umbuliso.
Akukho nto sinokubulela ngayo, kuba siyiyo, into yam- ingqolowa yesanti elula ngokubhekisele kwintaba ukuba igalelo lakho kulo mcimbi lithetha ntoni kwihlabathi ...
… Ndiphinda ukuvuyisana nam kwiwebhusayithi yakho ebalaseleyo, iincwadi ezimangalisayo kunye nezifundo. Ukubulisa kunye neeholide ezimnandi !!! Ingonyama
Molo Javi, kubonakala ngathi buxoki ..., kodwa emva kokukhangela okuninzi, ndifumene isisombululo kumbuzo wam ..., ibilula kunokuba bendilindele, (oku kuyenzeka, kuba andiboni kakhulu kunesiqhelo) .
Kwiskrini sokuqala seWindows Live Messenger, ngaphantsi komfanekiso ukubonisa, kuvela "i-akhawunti ye-imeyile":
Imenyu eyehlayo, ngaphakathi kuzo zonke iiakhawunti ze-imeyile ezavulwa, kujongwa kuphela ibhokisi yokukhangela yokhetho -ekungezantsi- «Khumbula iakhawunti yam» ...
Xa ibhokisi yokukhangela yokhetho: "Khumbula iakhawunti yam" ijongiwe, ukhetho: (Yeka ukukhumbula iakhawunti yam) ngokuzenzekelayo ivela ngezantsi kwayo, njengoko kunjalo, phakathi kwabazali, (ifonti yokubhaliweyo eluhlaza okwesibhakabhaka), ehlala ifihliwe, xa ukhetho: "Khumbula iakhawunti yam" ayijongwa.
Ngokucofa nje okukodwa (iqhosha le-mouse ephambili) kolu khetho, oko kukuthi: (Yeka ukukhumbula iakhawunti yam), iakhawunti ye-imeyile ekuthethwa ngayo iyanyamalala ngokungathi ngomlingo.
Yiyo leyo, ilula ...
Ndiyathemba ukuba ndicacile kwaye ndinceda ngokwaneleyo.
Ihug evela eArgentina. Ingonyama
Enkosi Leon ngegalelo lakho. Kuya kuba mnandi kakhulu kubantu abaninzi. Umbuliso ovela eSpain.
Iiholide ezimnandi Leon.
Kweli phepha linye unesifundo, kuya kufuneka ulandele ikhonkco.
Molo, ndifuna inombolo yefowuni ngokukhawuleza ukunxibelelana ne-hotmail.Ndicela undiphendule ngokukhawuleza, enkosi, ukwanga.
ahoyga ndingayivula njani i-msn
Iyandiphambanisa, akukho ndlela yokufunda le miyalezo iqhotyoshelweyo, ndikhuphele indawo yamandla amatsha kwaye andinakukwazi nokuncediswa ngumntu, ndingumqali kwaye andazi ukuba ihamba njani le nto kwaye inika kuphela ndineengxaki nge-msm, khange yenzeke kum.
Ndine-hotmail kodwa ayingeni kumthunywa umntu uyandibiza
Ipholile kakhulu kodwa andikwazi ukuyikhuphela kwaye andinakho ukuyifaka
molo ndifuna ukwazi ukuba ndenza njani ukufaka iiwindows live messenger kwaye kuthatha ixesha elingakanani ukuyifaka kuba andikwazi ukuyifaka enkosi… .. chawis
UJavier Mauricio sitsho
Ndifuna ukuba nomthunywa
Phendula kuJavier mauricio
1-5-2008 (740) sitsho
Molo, andazi ukuba ndingayitshintsha njani iphasiwedi, ndicela undincede.
Phendula 1-5-2008 (740)
Iphasiwedi itshintshiwe ukusuka kwi-Hotmail, funda esi sifundo:
jairo arevalo sitsho
Molo, unjani? Undikhumbuza iiakhawunti, ndingathanda ukuba undincede kule nto.Ndicinga ukuba kungenxa yezikripthi okanye ulungelelwaniso oluthile.Ndingavuya ukuba ungandicebisa, enkosi ...
Phendula u-jairo arevalo
Ewe, kufanele ukuba kube yingxaki kwinkqubo ethile "yokhuseleko" ethintela loo datha ukuba igcinwe, enje ngesibali seti seSpyBot okanye into efanayo.
molo, jonga kuvela ukuba ndenze iakhawunti kwiWINDOWS LIVE kwaye ndibeka @ hotmail.com kwiakhawunti yam kwaye xa ndizama ukuyivula zama ngolunye ukhetho ngokubeka @ hotmail.es kwaye ingavulwa kodwa andiyenzi. Ndifuna ukuba neakhawunti nge @ hotmail.es Ndifuna ukuba nayo ku @ hotmail.com nditshintsha njani?
Ndiyathemba ukuba ndicacile
Lala xa ikuvumela ukuba uvule i-imeyile nge .es kungenxa yokuba wenze iakhawunti kwi-hotmail ngololongezo, iza ngoluhlobo ngokwendalo, kuya kufuneka wenze enye iakhawunti entsha nge .com kwaye ulibale ngeyokuqala okanye usebenzise Zombini.
Andikwazi kungena umyalezo
Andinaye umthunywa omtsha
UAgustin Sarabia sitsho
Uviniga Asesino, ndisebenzisa iWindows Vista kwaye ndiqinisekisa ukuba ziphantse zafana nezo ze-XP (300 MHZ, 512 MB RAM memory kunye Internet Explorer 7)
Phendula uAgustín Sarabia
Andikwazi ukuthumela iCCo kumthunywa sitsho
ngotshintsho andinakuthumela ngeposi efihliweyo kwaye iphepha liyi ………… .short !!!!!!!!!!, ingaba ndizakuphulukana nabaqhubi okanye into evela kwinkqubo?
Phendula ku Andikwazi ukuthumela iCCo kwisithunywa
Molo, yiva umbuzo, ndisebenza eofisini kwaye i-msn ayivumelekanga, xa ndingena kumphathi wam uyayiphawula, kwaye ndithathe irekhodi lakho konke endikuthethayo kunye nokundithathayo. njengokuba isenza?
Kwaye omnye umbuzo, ukuba ndingena kwi-msn web, angayibona nayo okanye ngaba ikhona indlela yokuqhubeka nokusebenzisa i-msn ngaphandle kokuyiqonda
Ndiyathemba ukuba impendulo yakho kungekudala kwaye ndiyabulela kakhulu
Molo NDIFUNA UNGANDINCEDA NGOKUBA NDAYA KWIPHANDLU LOLAWULO LWAM I-COMPU YAM UKUSUKA E-AHI UKUYA KWIINKQUBO NEEMPAWU
KUNYE NOKUSUSA UMDLULELI KULAPHO, YEKA OKANYE KODWA NGOKU NDIFUNA UKUYIKHUPHA KWAKHONA kwaye ANDINAKUYENZA UNGANDINCEDA?
paola kunye ney sitsho
umbulali weviniga kerido enkosi * ulwazi lwakho .. belusinceda kakhulu wena uphezulu kodwa igama lakho alinako ukucoceka kunye nevumba elimnandi BE FELIX KOBOMI BAKHO ...
Phendula paola kunye ney
Ndiyenza njani i-hotmail.es
umda wemihla ngemihla
Xa usenza iakhawunti entsha kwi-hotmail kufuneka uqale ujonge ukuba onke amaphepha endalo ye-imeyile anenani eliqingqiweyo lokudala ...
Zama ukubhalisa ngo-12: 00 ebusuku, apho kuyenzeka ukuba ube khona xa umda.
UGabriela molina sitsho
Molo, ndineminyaka eli-11 ubudala kwaye ndiyalayisha umthunywa ka-2009 ayisasebenzi kum iyaphambana….
Phendula uGabriela Molina
Ngaba ukhona umntu onayo nayiphi na i-msn ayifuni ukuyikhuphela ?? !! ?? !!!!!
U-Esteban Solorzano sitsho
Molweni mandivuyisane nani malunga nokujongana lula nemicimbi. Ndinombuzo kwi-Live Messenger, enye yeendlela ekunikayo kukunika ingxelo yomfowunelwa ongafunekiyo, ebangela ukuba bayicime kuluhlu lwakho loqhakamshelwano nakwi-hotmail, ndiyenze nomhlobo ngempazamo kwaye ndifuna ukungena kuyo Njengomfowunelwa omtsha, akandityhileli ubume bakhe, nangona angazibona ezam kwaye andithumelele imiyalezo, ii-winks, njlnjl. Andikwazi kuba undixelela ukuba mandibamkele njengabafowunelwa kodwa ekugqibeleni ndiyazama kwaye Andikwazi. Ngoku ndikhangela ngapha nangapha ndafumanisa ukuba kululuhlu lwabathumeli abangafunekiyo. Ndifuna ukwazi ukuba ngaba ikhona indlela yokuyisusa kolo luhlu
Phendula u-Esteban Solorzano
Molo! Bendifuna undincedise ekwenzeni iakhawunti kwintombi yam, ndiyazama kodwa andikwazi ...
Molo apho!! Ndifuna ukuba undincede ndisombulule umbuzo.Ngaba unokunxibelelana phesheya ngomyalezo ophilayo? Enkosi, enkosi, enkosi
Juan Alberto sitsho
Phendula ku-juan alberto
kuba xa ndizama ukuvula umthunywa wam, ndihlala ndifumana umyalezo wePUNTO NET, ONDIFUNA ukuba ndivule umthunywa wam, ndingathanda ukwazi ukuba mandenze ntoni
Ndineengxaki ngeewindows live messenger, uqhagamshelo luhlala lulahlekile, sele ndiyijongile yonke into, ikhutshiwe kwaye iphinde yafakwa, isantya sam se-intanethi yeyona ikhawulezayo kwaye le yokugqibela ayinakuba sisizathu sokuba ndiphulukane nonxibelelwano kuba ndizula ngaphandle kwengxaki, ungandinceda ukusombulula le ngxaki ???
Ndiqala i-MSN ngokhetho "Khumbula iakhawunti yam" ngetsheki, ngaloo ndlela ndikhetha phakathi kweeakhawunti ezi-2 endizilawulayo ukuyivula, kodwa ngalo lonke ixesha ndiqala kwakhona i-MSN, ndiyabona ukuba ayisazigcini iiakhawunti ekuqaleni. Ungayisombulula njani le ngxaki? Ndiyibuyisele kwakhona iWindows Live Messenger kunye ne-Plus kwaye andiphumelelanga. Ukuba kunokwenzeka bhala kwi-imeyile yam.
Umsebenzi david sitsho
Phendula umsebenzi david
Sonia Patricia sitsho
po0es no0 pu3d0 fakela kwiifestile zomthunywa ophilayo
qe ag000 iyanceda ……………
Phendula uSonia Patricia
Molo, andazi ukuba ndingena njani umthunywa, ndimtsha kule micimbi, ndingathanda ukuba undixelele ukuba ndenze eyona nto ilula kwaye ikhawulezayo ukuyenza, ndineewindows 98
Iifestile ezintsha zihlala zinemingxunya, kunokwenzeka njani ukuba iiakhawunti zabanye abantu endingazaziyo ziphume okanye zize kum, masibone ukuba umhlobo wam unabafowunelwa bakhe, kutheni ndizifumana zonke iiakhawunti zakhe? ukuba kukho umntu owaziyo impendulo nceda uyipostle enkosi
Phendula u Chalo
Ndiyifaka njani ngaphandle kwentsholongwane?
molo kitty sitsho
Molo, ekuphela kwento endifuna ukuyazi yindlela endenza ngayo ukuze ndikwazi ukuncokola xa umyalezo wam ucinyiwe kwiscreen sam, kwaye kwi-bar ephambili ndicebisa ukuba ndenza njani ukuyifaka kwakhona. Ndiyacotha kancinci malunga noku, andazi kodwa ndiyafunda, ndincede, nceda, undicenge.
Phendula hello kitty
Hi Vero anti wandibiza yamileth Umtshana yakho danna asle njengalo menseñer enye nomphathi wendlela kunye impendulo Noma le goodbye jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Molo, ndingu-IRIS kwaye ndiyazi ukuba i-aze ukuze i-msn iphinde iphume kwiscreen.
Jonga, uya kwi-intanethi, ubeke msn eSpain, kwaye ufake iakhawunti yakho, kwaye iya kuya ngqo kuwe.
Molo, ndifuna ukwazi ukuba ndingamguqula njani umnxibelelwano ngaphandle kokuyicima, kuba andifuni omnye umntu azi ukuba uyayisusa. Ndilindele impendulo yakho, enkosi.
Ndifuna umthunywa omtsha, nceda undixelele ukuba ndiyifumana njani, undicenge
jonga ndinike into eluhlaza ukuyifaka kodwa ayifuni kwaye ndifuna ukuba ifakwe
Udadewethu omncinci uphulukene nemibala kwi-pc yam kwaye wayenza yapinki, ndingenza ntoni?
Sele ndisombulule onke amathandabuzo am ... nombuliso kulo lonke iliwa laseGalicia!
ULuis Jose sitsho
bayamangalisa ngenene enkosi!
Phendula luis jose
iluchi montenegro (ilucia) sitsho
molo yomsoy lucia kwaye andinawo umdla wokwazi okuninzi malunga nomthunywa kuba ndinomdla omkhulu ebusweni kwaye umthunywa sele ephelelwe yimfashini kodwa nangoku igrafu kuba baninzi abantu abanomdla ngokulinganayo olungileyo hehe olungileyo ulamanga (k) ? = Iphe
Phendula i-luchi montenegro (elucia)
Molo, ndinguLucia kwaye andinamdla! Yazi okuninzi malunga nomthunywa kuba ndirhintyelwe ebusweni kwaye ndithunyiwe sele ndiphume ngefashoni kodwa ke nangoku igrax kuba baninzi abantu abanomdla ngokulinganayo kulungile hehe good (K) oko kuthetha ukwanga! iluchi (ilucia)? =)
Molo, ndinguMichelle, ndenza ntoni ukuze umphathi wam abe ngumhlobo wekati?
Molo kati sitsho
molweni nonke ndinomlandeli ogama linguMichelle
Phendula Sawubona ikati
UJose Luis sitsho
Ndinengxaki, ndingathanda ukwazi ukuba ukhona umntu onokundinceda. Kukho umntu endidibene naye ngencoko kwaye kuvela ukuba kwidilesi yakhe ye-hotmail nakwiphrofayili yakhe kukho ifoto yam, ndiyathetha ukuba yinkohliso, ndingayenza njani ingxelo, ndiyaphi?
Enkosi kumagqabaza akho
Phendula José luis
Ndiyayazi ukuba ndinayo njani iCoNoS
POSA IIMFANEKISO ZAM KWifestile
UTSHINTSHO OLUQUKETHWE AKUKHO
I-mesSeNgEr PlIs NDINCEDE ………… ..
Molweni, ninjani? Kulungile, bendine-msn ukusuka kunyaka ka-2007 endingakhange ndiyisebenzise kude kube ngoku, ndifuna ukuyivula kwaye ngokungathi icinyiwe ndifuna ukuyifumana kwakhona kwaye andithumeli nto ... Ndithumela umyalezo kwaye Ndithumele omnye umyalezo ... ngesiNgesi ... impendulo eyimfihlo .. nokuba loo nto ishiya ngathi akukho nto ilungileyo .. umntu uyazi ukuba ndingenza ntoni ...
ukusela ipepile sitsho
Ingaba ipepile ilunge kakhulu okanye ucinga ukuba ayilunganga?
Ukuphendula ngokusela ipepile
Ndifunde kakuhle kwaye ndakhangela kwiindawo ezahlukeneyo, kodwa andisifumani isisombululo, bendineefestile eziyi-8.5, ndiyivuselele kodwa andikwazi ukuvula ii-windows zabafowunelwa, kwaye andinakuphendula xa ndidibana ... nceda nceda. Umbuliso.
Ukhetho lokukhumbula iakhawunti yam kwiphepha lokungena kwi-hotmail lanyamalala. Ndiyibuyisela njani
ngubani onenombolo yomyalezo wewindows ndifuna ukufumana iakhawunti yam
Molo, ndinengxaki ne-messeger kuba bonke abafowunelwa bam bahlala bekhangeleka ukuba banqunyanyisiwe, ingaba inokwenzeka njani le nto? Iyanceda, kwaye ndifuna ukususa xa ndivula ibhokisi engenayo endaweni yokuba ivulwe ngqo apho iimvulophu, Ndithatha iifestile bukhoma ukuvula i-inbox ukusuka apho
Molo apho !!
Ndifuna ukwazi ukuba ndingawucima njani umyalezo wobume bam, kodwa ngaba kusekho kwiprofayili?
Sele ndiyibonile kubahlobo bam kodwa abafuni ukundixelela ukuba ndenza njani !!
Khumbula ukuba akukho mntu uwubonayo umyalezo wam wenqanaba phantsi kwegama lam, kodwa ukuba eludongeni lwam Kanye ngelo xesha kwaye xa ndilipapasha ...
ENKOSI KAKHULU NGOKUSEBENZISANA KWAKHO NDILINDE IMPENDULO !!
Molo, igama lam ndinguConsuelo, ndiyifundile incwadana yakho malunga nendlela yokukhuphela iiwindows live messenger kwaye ndicofa ukukhuphela kwaye ayikhupheli, into endifuna ukuyivula yi-imeyile entsha, kuba le ndinayo ayisebenzi enkosi
Phendula u CONSUELO
ULina Maria sitsho
Molo, ndiyifakile inguqulelo entsha yomthunywa wam kodwa andikwazi ukuqala iifowuni zevidiyo kwaye ndibonakala ndinqanyuliwe.Ndisombulula njani oko?
Phendula u-lina maria